Ihowuliseyili cosmetic bag mveliso, abavelisi kunye nababoneleli - Dongguan Yihua handbag Co., Ltd.
Ikhaya >Iimveliso >Ingxowa yezithambiso
Ingxowa erhabaxa yezithambiso
Uyilo lwefashoni, entle kwaye yomelele, kulula ukuyiphatha. Amalaphu efashoni akumgangatho ophezulu kunye neempahla zakho.
Ishell ibhegi yezithambiso
Ibhegi yokuhombisa ephathekayo, isambatho sangaphandle esine-fiber, esinganyangekiyo kwaye singanxibi, iqokobhe lemilo yakudala, inemfashini kwaye intsha, ubungakanani obuncinci, amandla amakhulu.
Inayiloni ingxowa yokuthambisa
Isikhwama sokwenza ukukhanya esikhanyayo, ilayiloni yenyani, into enganyangekiyo ekunxibeni, ifashoni entsha, amandla amancinci, imibala emithathu.
Indawo yokugcina ibhegi yezithambiso
I-Sardine 3D iintyatyambo zeleyisi, ezintsha kunye nefashoni, ubungakanani obuncinci kunye nomthamo omkhulu, ekulula ukuwuthwala.
Umaleko ophindwe kabini, omile okwe ntyatyambo, encinci ngobukhulu, enkulu ngomthamo, esongekayo, kwaye kulula ukuyamkela.